Gwema izinkinga lapho ufometha i-pendrive nge-FAT noma i-exFAT | Ngivela kwa-mac
Fometha i-flash drive ngeFAT noma nge-exFAT system
UPablo Aparicio | | OS X INgonyama Ibhubesi, Izifundiswa
Uma ungangibuza ukuthi iyiphi ifomethi ephelele yedrayivu ekhishwayo, kuzofanele ngicabange ngempendulo yami bese ngigcina ngakha enye: Ilungele ini? Impela ubungangiphendula lokho ukugcina idatha, kepha ngiqonde ukuthi kuzosetshenziswa amakhompyutha aphi i-pendrive. Inkinga ukuthi kukhona iMac, Windows neLinux hhayi bonke abangakwazi ukufunda noma ukubhala ngawo wonke amafomethi. Okukhona kukhona takhiwo letimbili: FAT ne-exFAT
Ngakho-ke siyini isincomo sami? Ngikucacisile, kepha okokuqala kufanele sichaze kancane ngaphezulu ukuthi ifomethi ngayinye iyini. Uma sizosebenzisa i- pendrive kunoma iyiphi ikhompyutha Kungakhathalekile ukuthi uhlelo lwakho lokusebenza luzoba yini, akunangqondo ukufometha idrayivu ngefomethi engasekelwa yinoma yimuphi wabo. Ngezansi sizochaza ukuthi ifomethi ngayinye isetshenziselwa ini.
1 Izinhlobo zefomethi
1.2 IMac OS X Plus
2 ExFAT noma i-NTFS
3 Ungayifometha kanjani i-pendrive ku-exFAT
Ifomathi I-NTFS (New Technology File System) yadalwa yiMicrosoft ngo-1993 ngohlelo lwayo lokusebenza. Ngaphandle kokungena emininingwaneni eminingi, kufanele sikhumbule ukuthi iMac OS X ingafunda, kepha ingabhali, kudrayivu efomethwe ku-NTFS. Ngaphandle kokufaka amathuluzi avela eceleni, ngeke sikwazi ngisho ukufometha i-pendrive ku-NTFS evela kwi-Mac futhi, uma sifuna ukuyisebenzisa kukhompyutha yethu ngaphandle kokufaka isoftware engadingekile (njengoba sizochaza ngokuhamba kwesikhathi), kungcono ukuthi ungafomathi ukushayela kwethu kwepeni ku-NTFS.
Lungisa iphutha lekhamera 'elingaxhunyiwe' ku-OS X
Uma ukhetha ukusebenzisa ifomethi ye-NTFS, kufanele wazi ukuthi kukhona amathuluzi avela eceleni anikeza i-OS X amandla okufunda nokubhalela i-NTFS, njenge I-Paragon NTFS noma i-Tuxera NTFS. Kepha, ngiyagcizelela, akukufanelekile uma sicabanga ukuthi kunezinhlobo eziningi zomhlaba wonke.
I-NTFS isebenza kahle kuma-hard drive kuma-computer asebenzisa i-Windows njengohlelo olusebenzayo.
IMac OS X Plus
Ukufingqa, singakusho lokho IMac OS X Plus Iyafana ne-NTFS, kepha kulokhu konke kwenzelwe isistimu yokusebenza ye-Apple. Uma sine-pendrive esizophinda siyisebenzise ku-Windows, akufanelekile ukukufometha ku-Mac OS X Plus ngoba ngeke ikwazi ukufinyelela kudatha yayo. Kungcono ukusebenzisa enye yezindlela ezimbili ezilandelayo.
IMac OS X Plus kufanele isetshenziswe kuphela kuma-hard drive lapho i-OS X izofakwa khona.
Idale inguqulo yayo yokuqala ngo-1980 futhi eyokugcina (FAT32) ngo-1995, kungashiwo ukuthi i-FAT (File Allocation Table) uhlelo lwamafayela olutholakala emhlabeni wonke. Ingasetshenziswa ngisho nakumadivayisi afana neziduduzi, amaselula, njll., Kepha inenkinga enkulu uma sifuna ukuyisebenzisa kumakhompyutha wedeskithophu kuphela: ubukhulu obusekelwa yi-FAT32 bungu-4GB. Uma, ngokwesibonelo, sinevidiyo engu-5GB ne-pendrive efomethwe nge-FAT, sizoba nezinketho ezimbili: ukuhlukanisa ifayili libe izingxenye ezimbili noma ukulishiya lapho lalikhona ngoba ngeke sikwazi ukulifaka kwi-Pendrive yethu.
Landa ama-movie wamahhala ku-iPhone noma kwi-iPad
Njengoba ngishilo ngenhla, i-FAT, i-FAT16 ne-FAT32 kufanele isetshenziswe kuphela kumadrayivu asuswayo esifuna ukuwasebenzisa, ngokwesibonelo, ku i-Sony PSP noma izinkumbulo zamakhamera.
Ekugcineni sinefomethi exFAT (Ithebula Elabelwe Ukwabiwa Kwefayela), ukuvela kweFAT32. Iphinde yadalwa yiMicrosoft futhi iyahambisana kusuka ku-Snow Leopard kuye phambili nokusuka ku-XP kuye phambili, kepha kukhona umehluko obalulekile kusuka enguqulweni edlule, njengosayizi wefayela ophelele ku-exFAT eyi-16EiB. Ngaphandle kokungabaza lokhu Ingabe inketho engcono kakhulu Uma sifuna ukusebenzisa i-pendrive kumakhompyutha weWindows, Mac kanye neLinux, yize lokhu kokugcina kungenakufomethwa ngaphandle kokufaka isoftware.
Sizosebenzisa i-exFAT ukufometha noma iyiphi i-hard drive yangaphandle noma i-pendrive esiyifunayo sebenzisa ikakhulukazi ku-Mac naku-Windows. Uma kufanele siyisebenzise kumadivayisi afana nezinduduzo noma amakhamera ashiwo ngenhla, ngeke sisebenzise le fomethi.
ExFAT noma i-NTFS
Uma ungabaza phakathi kwe-ExFAT noma i-NTFS, ngokususelwa kulokho esisanda kukubona, into enengqondo kunazo zonke ukufometha i-pendrive noma iyunithi yememori yangaphandle ngefomethi ye-ExFAT ngoba kuyinketho eqinisekisa ukuhambisana okuhle kakhulu, okuhambisana nazo zonke izinhlelo ezisebenzayo zamanje.
Ungayifometha kanjani i-pendrive ku-exFAT
Labo kini abangakaze bezwe ngale ndlela, ningesabi. Ukufometha i-hard drive, i-pendrive yangaphandle noma i-USB kwi-Mac kulula kakhulu futhi inqubo ayishintshi kakhulu uma sifuna ukuyifometha ku-exFAT. Kepha, ukugwema ukudideka, ngizochaza imininingwane yezinyathelo:
Kufanele sivule ifayela le- Disk Umbuso. Kunezindlela ezintathu ezihlukile zokuyithola: kusuka ku-Launchpad, okuyilokho onakho kuzithombe-skrini, ukufaka ifolda ye-Applications / Others / Disk Utility noma, engiyithandayo, kusuka ku-Spotlight, engiyithola ngokucindezela i-Time the CTRL + Spacebar izinkinobho.
Uma sesisetshenzisiwe sediski, sizobona isithombe esinjengaleso sokuthwebula. Sichofoza kweyunithi yethu. Akukho ukuchofoza kokungaphakathi kweyunithi. Yilokho kuphela ukwahlukanisa okukhona, ngakho-ke kuzovela okuningi uma sinezingxenye eziningi. Njengoba esikufunayo ukufometha konke, sikhetha impande.
Okulandelayo, sichofoza ku-Delete, okulingana nokufomatha ku-Windows.
Sivula imenyu bese sikhetha i-exFAT.
Ekugcineni, sichofoza ku- «Susa».
Angizange ngifomathe noma yini ku-NTFS isikhathi eside. I-ExFAT yifomethi yawo wonke amadrayivu ami angaphandle futhi manje nawe ungenza okufanayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » I-Mac OS X » OS X INgonyama Ibhubesi » Fometha i-flash drive ngeFAT noma nge-exFAT system
Amazwana ayi-64, shiya okwakho
U-Antonio Castellano kusho
Kwakucace bha kimi. Kusukela manje ngizokwazi ukusebenzisa i-pendrive ezinhlelweni ezahlukahlukene zokusebenza ngokuthula kwengqondo. Izindatshana ezinhle kakhulu zikaD. Pedro Rodas.
Phendula u-Antonio Castellano
UPedro Rodas kusho
Ngiyabonga, Antonio. Ngiyakukhuthaza ukuthi ulandele engikuthumele.
Phendula uPedro Rodas
U-Ernesto Gonzalez kusho
Ngiyabonga, ithiphu ilungile futhi ilusizo kakhulu kubantu abanezinkinga zokufomatha.
Phendula u-Ernesto González
Sawubona, ntambama, ngine-hard drive futhi ngifuna ukuyisula ngiyifomethe i-mac namawindi, kepha kwi-mac ifomethi ye-EXFAT ayiveli, ukuyinika leyo fomethi lapho ngixhuma i-hard drive yami yangaphandle = , inginika kuphela amafomethi we-mac ongakhetha kuwo
Ngiyethemba ungangisiza. Mayelana
Okuthile okuthakazelisa kakhulu ngokufometha idiski yangaphandle ku-exFAT ukuthi i-OS X ingayikhomba bese ivumela ukuseshwa okusheshayo nge-Spotlight.
Siyabonga ngomnikelo uHéctor.
Enye yezinzuzo ezinhle zefomethi ye-exFat. Ngiyabonga Hector!
Ukuphela kwento okufanele uyikhumbule ukuthi i-exFat ayihambisani neWindows XP, yize kukhona isichibi sayo.
Ngempela i-Atonio, iWindows XP idinga ukuvuselelwa ukuze ikwazi ukuphatha amafayela we-exFAT, ongalanda kuwo. Siyabonga ngokuphawula kwakho.
Ngokuphumelelayo. Kufanele ulande isichibi ukuze sisebenze. Siyabonga ngokufaka!
Ngizofometha i-HDT yangaphandle ye-1TB kwifomethi ye-exfat, ngiyinika yiphi usayizi wesabelo sosayizi?
Ngabe uzosebenzisa amafayela amakhulu? Uma kungenjalo, ngincoma ukuyifometha ku-MS-DOS ukuze le disk ihambisane neWindows ne-OSX.
UWalter White kusho
Nginokungabaza okufana nokwomngane wakho
Phendula uWalter White
Okuwukuphela kwento embi ukuthi ijubane lokudlulisa lehla kakhulu, lisuke emizuzwini engu-15 laya ku-25 kufayela le-GB elinesi-7):
Uqinisile ngalokho. Isivinini sokudlulisa sehla kakhulu.
Ngabe uyazi ukuthi kungani kungithatha ngaphezu kwemizuzu engama-25?
futhi uma unama-io angaphambilini njengakwami ​​enginawo u-10.5.8 ??? Noma iyiphi isoftware ??
NGEMVA KOKUNIKELA LOKWENZA LOKHU, UNGANGITHANDELI I-USB YE-TV ... ¿? ¿? ¿? ¿?
NjengoJosele, uma i-hard drive yeToshiba 1TB isetshenziselwe i-Exfat, iyaziwa yizo zombili amakhompyutha, ngingagcina ama-movie ngaphezu kwe-4Gb, kepha ithelevishini ye-LG ayiyiboni, okuyilapho ngibuka khona ama-movie ngomsindo uhlelo lwami lomsindo nesikrini sekhwalithi enhle. Angazi ukuthi ngenzeni, noma ngilande ama-movie nge-laptop yami noma angazi ukuthi ngenzeni ukwenza ithelevishini ikubone lokho.
Ngifuna ukuyixazulula ngoba angikwazi ukusebenzisa iMac ukulanda ngoba lapho angikwazi ukukufaka ku-TV… Futhi ukuthenga i-Apple TV ukuyibuka akusona isixazululo ngoba ngine-hard drive yalokho.
Ngabe othile angaba ne-TV LG42LB630V noma efanayo futhi asitshele ukuthi uyixazulule kanjani?
Ngisesimeni esifanayo nomlingani, imodeli efanayo ye-LG TV futhi ayingivumeli ukuthi ngidlale noma yini kusuka kupendrive.
Ngicabanga ukuthi kuzoba nesixazululo ngaphandle kwe-appleTV noma ukufuna uhlelo lwamawindows kuphela lwalokhu.
Yilungise ngokusebenzisa i-multimedia hard drive noma i-pendrive ukubuka ama-movie ku-TV, nokukhawulela ukusetshenziswa kwe-hard drive yakho ukwenza izipele, noma okuphambene nalokho.
Ngicabanga ukuthi uma usebenzisa i-hard drive yangaphandle njenge-rounder, izohlala kancane kakhulu. Ngiyisebenzisela ukugcina kuphela.
Ngine-DD yangaphandle ku-ExFat futhi ngine-Western Digital multimedia (ayikho i-hard disk yangaphakathi, kuphela icala) yokubuka izinto ku-TV. Ngixhuma iDD kwi-multimedia futhi ayingitholi lutho. Okubi kakhulu ukuthi ngiyizamile nangemultimedia evela emndenini nakubangani futhi ngisayisebenzisa.
Imininingwane yakho ye-ExFat yangisiza kakhulu ukuphatha i-Toshiba ext disk yami ku-Win ne-Osx
Kwi-LG TV, nawe unethuba lokuyibuka ngesabelo semidiya, ufake i-Universal Media Server kukhompyutha yakho bese uyibuka ngokusakaza.
Imininingwane yakho icacile futhi ibe wusizo olukhulu kimi. kepha nginenkinga, ngine-hard drive yangaphandle ku-FAT32, kepha lapho ngifuna ukususa amafayela iwayisa kudoti kodwa ngeke ingivumele ngithulule udoti ngoba ithi anginazo izimvume ezidingekayo. Angazi ukuthi ngikwenze kanjani lokhu, imininingwane eku-hard disk ingitshela ukuthi ingafundwa futhi ibhalwe. ngibona kakhulu
sawubona, futhi ngefomethi yefayela lamafutha angaphambilini ngingaxhuma i-hard drive yami ku-tv noma yaseshashalazini lasekhaya ukubuka ama-movie futhi ifundeka njengokujwayelekile? Ngisebenzisa windows ne-osx el capitan
URamiro Fernandez llano kusho
Sawubona, fometha kusuka ku-MAC ku-exFat, kepha nokho amawindi awakutholi. Ngifometha kumawindi ku-exFat, kepha kwakha ukwahlukanisa okuncane okungu-200 MB akukho okunye! AUYIBONI i-15800MB esele yepeni le-16GB, kungani lokho kungenzeka? Ingabe lukhona uhlelo lokusebenza lokwenza ifomethi esezingeni eliphansi ku-MAC?
Phendula uRamiro Fernandez llano
hlola ngohlelo lokuhlukanisa i-MBR uma ulunika ifomethi entsha (khetha kuthebhu engezansi kunendlela ye-exFAT)
hlola ngohlelo lokurekhoda lwe-MBR master boot
Nokuthula Ngcobo placeholder image kusho
URamiro kwenzeka into efanayo kimi, ungayixazulula?
Phendula u-Antonio Salcedo Gonzalez
Inkinga yami ukuthi nge-exFAT i-tv ayikwazi ukuyithola .. Ngabe kukhona owaziyo?
Sawubona. Ngine-LG TV futhi ngifakele idrayivu yami yangaphandle i-exFAT kodwa i-tv namanje ayiyiboni… Kukhona imibono? Ngiyabonga.
Ngikwenza lokhu futhi emafasiteleni ibona kuphela ingxenye engama-200 MB futhi ingitshela ukuthi ngifomathe futhi!
Sanibonani bantu, ngine-MacBook Pro, ngifomatha izinti zami ze-USB ku-MS-DOS FAT ukuze ngikwazi ukulalela umculo kumadivayisi asuselwa ku-mp3 kepha abanye abawazi, ngabe uncoma ini, kuzoba yini ngenxa ukwahlukanisa? Into exakayo ukuthi ngibalalele emshinini we-SONY bese ngiqopha umculo omningi futhi leyo mishini efanayo ayibazi. Ngiyabonga!
NGIYABONGA NGOLWAZI LWAKHO, KODWA NGIYAQONDA: UMA NGIFUNA UKWENZA I-PENDRIVE KA-16 GB NO-3.0. UMA NGISEBENZISA I-NTFS NGEZANSI, KUNGINIKA UKUTHI NGIKHETHE IZINKETHO EZININGI KU- «ISABELO SE-UNIT SIZE», NGIBEKA NGOKUPHELELWA KWAMA-BYTI ASE-4096. NGIYABONGA.
Sawubona, ngithanda ukuthi ungisize .. ngibone ukuthi ngabe lokhu kwenzeke kuwe futhi kwahlolwa ngawo wonke amafomethi wefayela futhi lapho ngifaka emotweni i-usb inginikeza iphutha, ngabe kukhona owaziyo ukuthi uzoyifometha ngaluphi uhlobo?
Incazelo ecacile, ephelele kakhulu, ewusizo futhi elula! Kungikhonze kakhulu! Ngiyabonga
sawubona, lapho ngenza lokhu, ingabe kuyasula konke okuqukethwe kwidiski yangaphandle? ngiyabonga
Ngisanda kuvuselela i-mac yami kwi-MAC OS SIERRA futhi lapho ngikopisha umculo kwisifinyezo, awuzwakali kunoma yisiphi isidlali somculo, ngiwususa ngezinsiza zediski ku-EX FAT futhi awuzwakali futhi, yini engingayenza, kusukela ngaphambili kungisebenzele kahle
Ngithemba usizo, ngiyabonga
Unjani? Ngisifunde sonke isihloko esihle kakhulu ngiyabonga ngolwazi oluhle kakhulu, Kokuhlangenwe nakho kwami ​​ngizosho imibono yami ngoba ngike ngangena ezimeni ezifanayo ngeWindows, Mac, Smartv.
Ama-Smartvs okucishe kube ukuphela kwendlela ayifundile yi-NTFS noma i-FAT, imininingwane ukuthi ama-movie alondolozwa ngekhwalithi enhle angaphezulu kwama-gig ama-4 kunamafomethi we-FAT amakhulu kunama-4 gig angenakwenzeka.
Mac, ifomethi ye-NTFS ifundwa kuphela, kepha uma une-disc ye-movie ungayidlala kepha ungangezi / ususe amafayela.
Engikwenzayo: Ngine-disk yangaphandle enginayo ngama-partitions ama-2.
Ukwahlukanisa kokuqala ngobukhulu ku-NTFS futhi Okubalulekile ukuthi kungokokuqala ukuze iSmartv ikuthole ngokujwayelekile futhi ikwazi ukubuka ama-movie.
Isigaba sesibili se-exFAT sincane kancane kunokusisebenzisa ku-MAC noma ku-Windows lapho ngenza khona izipele noma ukushintshana ngamafayela Futhi ngakho-ke amasistimu wokusebenza ama-2 angasusa / afunde amafayela ngaphandle kwezinkinga, Futhi ngokwahlukanisa kwe-NTFS ngingangeza / ngisuse ama-movie futhi ngiwabuke ngaphandle kwezinkinga ku-Smartv.
Idiski engiyisebenzisayo yi-1 Tera futhi ngine-partition yokuqala ezungeze ama-movie we-NTFS angama-700 gigs kanye ne-Second partition 300 gigs approx exFAT for backup file etc. Sanibonani.
Inketho enhle, okuwukuphela kwento ukuthi uma ulanda ama-movie ku-mac yakho, ungawadlulisela kuphela kudiski yangaphandle esiqeshini se-exFat, ngoba engxenyeni ye-NTFS ifundwa kuphela, ngakho-ke ukwazi ukuwabona ku I-smart TV evela ku-LG udinga i-Windows pc ukudlulisa ama-movie kusuka kusigaba se-exFat iye ku-NTFS ...
Kunoma ikuphi ngiyabonga ngalo mbono 😉
UFreddie Gonzalez Cortez kusho
Thenga i-USB flash drive iFLASH DRIVE 2.0 128 Gb ithi ikhava yayo iyahambisana namawindows, ngine-windows 7 professional, le pendrive uma ifunda amagama wamagama, yenza kahle kepha ayidlali amavidiyo noma ama-movie icabangele ukuthi iyonga zona futhi Zithatha isikhala, ngakho-ke ku-pendrive kepha ayidlali amavidiyo ku-WMV naku-VLC.
Ingabe kukhona engikwenzayo okungalungile?
Phendula uFreddie Gonzalez Cortez
Sawubona okuhle, bheka, ngithenge i-hard disk engu-3tb Toshiba futhi uma ngiyenza ku-FAT kuphela igcina i-3Tb kodwa uma ngiyifometha ku-Ex-Fat ingitshela ukuthi isikhala esikhona yi-800Gb, yini engingayenza?
Sawubona ubusuku obuhle, nginesidlali se-multimedia, futhi lapho ngisusa ama-movie enganginawo, angazi ukuthi ngenzeni noma kwenzekeni manje njengoba umdlali engangazi, omunye umuntu wayengangitshela ukuthi ngenzeni ukuze ngikuthole, Ngiphinde ngachitha inkokhelo, ngiyabonga.
Sawubona, hei, nginenkinga, mhlawumbe angizwisisanga kahle noma angazi, kepha ngifomathile i-USB yami nge-Ex-Fat futhi manje alukho uhlelo olusebenzayo oluyitholayo ... uma ungangitshela ukuthi kungani , Ngingakuthokozela kakhulu.
Kufanele ngifomathe idiski yangaphandle, futhi lapho ngikhetha i-exFAT emawindini, ingivumela ukuthi ngikhethe kusuka kuma-kilobytes ayi-128 kuye kwangama-32768, iyiphi oyincomayo ukuthi ukhethe ukukhulisa isikhala sami siye phezulu?
formatie pendrive enwetshiwe exfat kepha windows pc ayingiboni, ngingayixazulula kanjani noma yini?
UFabian A. kusho
Okuthunyelwe okuhle kakhulu kithina esingazi okuningi ngalezi zinto.
Phendula uFabian A.
UJAVIER MARTINEZ kusho
Ngithuthukise i-Imac yami nge-Ox High Sierra. Konke okuhle ngokomthetho. Kepha lapho ngisebenzisa ama-pendrives namadiski angaphandle engiwafomathile ku-FAT32 ukuwasebenzisa kunoma yiluphi uhlelo lokusebenza, awungivumeli ngidlulise amafayela angaphezu kuka-2GB lapho kuze kube yileso sikhathi sangivumela ukuthi ngidlulise amafayela afinyelela ku-4GB. Ngiphinde ngayifometha kabusha kusuka ku-Disk Utilities, kepha inkinga iyaqhubeka. Angazi ukuthi ngabe omunye umuntu wenzeka ngendlela efanayo futhi angikwazi ukuyixazulula.
Phendula ku-JAVIER MARTINEZ
Javier omuhle, usitholile isisombululo? Nami kwenzeka into efanayo angimtholi, ngiyabonga.
UJose Luis Picazo Cantos kusho
Kwenzeka okufanayo kimi, ngibize ukwesekwa kwe-AppleCare Protection Plan futhi abanalo nhlobo icebo. Ngakho-ke njengoba ngibuyekeza ku-MacOS High Sierra 10.13.2 angikwazi ukukopisha amafayela amakhulu kuno-2GB ku-Fat32.
Phendula uJosé Luis Picazo Cantos
Javier omuhle, kwenzeka into efanayo kimi futhi anginaso isixazululo, kukhona umuntu ongasisiza?
Nginamadiski amabili angaphandle: elilodwa ku-FAT32 nelisha engilifomethe laba yi-exFAT. Ngisebenzisa iMac neWindows futhi ngifuna ama-discs ukudlulisa imininingwane nokubuka ama-movie.
Inkinga yami kuphela ukuthi lapho ngikopisha imininingwane kudiski bese ngiyisusa, umthamo wediski UNGABUYEKEZI, ulokhu ungikhomba njenge- "Used" 50gb yize ngiwasusile ama-movie, ngakho-ke ngilahlekelwa umthamo omkhulu wediski. Ngabe othile angangitshela okufanele nokufanele ngikwenze? Ngibona kakhulu!
Ngithengile iMac futhi ngifomathile ama-hard drive womabili ku-ExtFat manje i-Samsung TV ayizifundi. Ngabe ukhona okwazile ukukulungisa?
Iñaki Goñi Salort kusho
Uqinisekisile ukukhipha udoti ku-Mac nge-Disk exhunyiwe. Ku-Mac Os, inqobo nje uma ungayikhiphi, idatha esusiwe ethi "kudoti" ihlala kudiski uze uyikhiphe. Ku-Windows, uma ususa kudrayivu yangaphandle, isusa "ngokuqinisekile".
Phendula ku-Iñaki Goñi Salort
Nginalezi zinkinga + ukungahambisani namawindows ne-linux yize ngiku-ExFat noma iFat32 futhi ayingivumeli ukwahlukanisa nami. Ngisanda kuvuselela i-PowerPC G5 yami yakudala (ngayihlisela ku-tiger nge-pendrive) futhi ngiyisebenzisela ukwahlukanisa nokufometha ama-pendrives amise ukusebenza kahle. Njengamanje ngenza lokhu ngivela kwi-PowerPc noma ku-Linux (gparted ...), bobabili bangivumela i-Fat32 hhayi i-ExFat.
Sawubona, ngisanda kufometha induku ye-USB ngefomethi ye-ExFat kanti amafayela anokwandiswa kwe-mp4 noma .fat awangivumeli ukuthi ngikopishe-nginamathisele. Umshini uyiMacbook Pro ... Yini engingayenza?
Iyini i-schema futhi yenzelwe ini? futhi yiluphi uhlelo esiluthathayo lapho sifometha ipeni ku-exFAT?
Sanibonani nonke, nge-NTFS ngikwazi ukuvikela i-USB yami ngezimvume zokuphepha, kepha ngohlelo lwe-xfat angikwazi ukunikeza ukuphepha ku-USB, ngabe kukhona owaziyo ukunika ukuphepha ohlelweni lwe-xfat ???
Isitezi sesithathu kusho
Sawubona, ngiyabonga ngalo lonke lolu lwazi oluphelele. Kodwa manje. Ngine-usb 3.0 yami efomethwe ku-exFat, enamafayela e-.avi kanye .mkv, futhi ngizama ukubuka ama-movie ku-bluray, futhi ayikuboni.
Ukubingelela, Ngabe i-MAB ebhuthazayo noma iWindows OS PenDriver ingakhiwa kusetshenziswa le fomethi ye-exFAT? Uma sifuna ukudala i-DOS boot ku-Pendrivar ye-Windows 7, ingabe iyasekelwa ngama-exFAT partitions?
UKevin Garcia kusho
Nginenkinga engingatholi ukuthi ngiyixazulula kanjani:
Ngine-usb engama-64gb, kepha ngasizathu simbe ikhompiyutha ye-windows ifometha yona ibe yifomethi ye-Fat300.
manje i-mac, yenza okufanayo kimi angazi ukuthi kungani, noma ngabe ingama-64gb ifometha kuphela i-XP bese kuthi abanye bakushiye kungenalutho.
Manje nginenkinga ebucayi kakhulu, ngiyifomatha leyo usb kwimodi ye-ASFP futhi uma ithatha u-64gb, into embi ukuthi manje anginayo inketho yokushintsha nganoma iyiphi indlela ngibuyele ku-exfat, kungani ?????
Phendula uKevin Garcia
I-HomePod firmware yembula i-Apple TV ngokuxhaswa kwe-4k nge-HDR 10 ne-Dolby Vision
Isikhathi sokuthumela se-AirPods sehliswe saba amaviki ama-4